Turkiga: Tareenkii ugu horreeyay oo koronta ku shaqeeya oo la tijaabinayo - Tilmaan Media
Turkiga: Tareenkii ugu horreeyay oo koronta ku shaqeeya oo la tijaabinayo
in TEKNOLOJIYAD, CAALAMKA, DHAQAALE
Shikradda gaadiidka samaysa ee laga leeyahay Turkiga (TUVASAS) ayaa sheegtay in ay bilawday tijaabada tareen korontada ku shaqaynaya.
” Xittaa iyadoo lagu guda jiro xanuunka Korona Fayras, shaqaalaha TUVASAS waxay aad uga shaqeeyeen in mashruucaan soo afjarmo” ayuu yiri wasiirka warashada iyo tiknoolajiyada ee Turkiga Mustafa Varank. Wasiirka ayaa intaas ku daray in Tareenkaan oo loogu tala galay in uu ukala goosho magaalooyinka Turkiga dhexdooda, waxaana lagu samayn doonaa kharash %20 kayar tareenada dalka dibaddiis laga keeno.
Tareenkaan tijaabada ah qalabka laga sameeyay %60 waxay kayimaadeen gudaha Turkiga, iyada oo la filayo in ay gaarto %80 wajiyada dambe ee soo saaridda tareenka, ayuu yiri wasiirku.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Turkigu qayb libaax ka qaadan doono hormarinta sistamyada tareenada caalamka, iyada oo Turkigu sistamka tareenada ku samayn doono maalgalin gaaraysa $15 billyan oo doollar tobanka sano ee soo socotta.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoglu ayaa dhankiisa sheegay in shirkadda TUVASAS oo markii hore loo sameeyay in ay noqoto shirkad dayac tir, ay noqotay shirkadda ugu wayn Bariga Dhexe ee samaysa sistamka tareenada. Wuxuu intaas ku daray in Turkigu 18 sano ee lasoo dhaafay ay ku bixiyeen lacag gaaraysa $338.46 bilyan hormarinta sistamayada gaadiidka iyo isgaarsiinta, $62.3 bilyan oo kamid ah lacagtaas waxay ku baxday hormarinta sistamka tareenada dalka.
Markab Iiraan laga leeyahay ayaa hawlgal kalluumaysi sharci darro ee ugu weyn adduunka ka wada biyaha Soomaaliya
Itoobiya: Jowhar Mohamed oo la xiray